Free participate in Mountainech webinar on automated transportation Tech News Nepal
सोमबार, भाद्र २९, २०७७ १२:२७
ई-लर्निङका लागि नेपाली युवाले बनाए सामाजिक सञ्जाल ‘स्कलर्स स्पेस’
काठमाडाैं । कोभिड १९ का कारण हरेक क्षेत्र मारमा परेका छन् । यसबाट सबैभन्दा बढी
माउन्टेकका आईटी कोर्षमा ८० प्रतिशतसम्म छुट, कुन कोर्ष कहिले देखि ?
काठमाडौं । माउन्टेक सोलुसन प्रालिले आकर्षक छुटसहित अनलाइनमा आईटी कोर्ष पढाउन सुरु गरेको छ ।
भाग २ः वेब डेभलपर कसरी बन्ने ?
काठमाडौं । आजको हाम्रो विषय विशेषगरी फ्रन्ट ईण्ड डेभलपमेन्टमा केन्द्रीत छ । तर यो विषय